G510ကိုRootမ ဖောက်ဘဲမြန်မာစာပေါ်အောင် လုပ်နည်း ~ IT Guide Myanmar
1:17 AM Android, Root လုပ်နည်း No comments
G510 Root မလုပ်ဘဲ မြန်မာစာပေါ်အောင်လုပ်နည်း APR7G510 Root မလုပ်ဘဲမြန်မာဖောင့်ထည့်ရအောင်
Huawei 4.1.1 No Need Code.. No Need Root …. No Need dload file …. No Need CWM … One Minute Myanmar Font Huawei Version 4.1.1 U8951(G510) , U8833(Y300) ဖုန်းတွေကို Root လုပ်စရာမလို … dload file မလို .. CWM မလို … Code မလုပ်ဘဲနဲ့ .. မြန်မာဖေါင့်အလွယ်ဆုံးထည့်မယ်
လိုအပ်တာကတော့ ဒါလေးဘဲဒေါင်းလိုက်ပါ http://goo.gl/4jpCy
ဒေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြောတဲ့ ဖုန်းမော်ဒယ်လ်တွေထဲက ကြိုက်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး Power ဖွင့်ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် Phone Internal Storage ထဲက HWThemes>> Diy Theme>> ကို ဒေါင်းထားတဲ့ TeeKg.hwt ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးထည့်လိုက်ပါ .
ဖုန်းချိတ်ဆက်ထားမူ့ ကို ဖြုတ်လိုက်ပါ ..ပြီးရင် Application ထဲက Theme ထဲမှာကြည့်လိုက်ပါ … Elegance ဆိုတဲ့ Theme ကိုတွေ့ ပါလိမ့်မယ် … အဲဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါ … အဲဒီမှာ Apply Theme ဆိုပြီးတော့ သူကမေးပါလိမ့်မယ် .. Theme with font ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါ … ဖုန်းက သူ့ ဘာသာ ရီစတက်ကျသွားပြီ ပြန်တက်လာလိမ့်မယ် .. ပြီးနောက် မြန်မာကီးဘုတ်ထည့်ပြီးရိုက်လို့ ရပါပြီ… တခြား Theme များကို သုံးချင်ပါက သုံးနိူင်ပါတယ် … ဒါပေမဲ့ တခြား Theme ကိုသုံးရင်တော့ Theme without font ကိုရွေးပေးပါ … အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူငယ်ချင်းများအတွက် MMSD မှ ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Posted Yesterday by nay thway0Addacomment APR5G510 Root မလုပ်ဘဲ မြန်မာဖောင့် ရအောင်လုပ်မယ် Huawei 4.1.1 No Need Code.. No Need Root …. No Need dload file …. No Need CWM … One Minute Myanmar Font ဒီကောင်လေး ရဲ့လက်စွမ်း Huawei Version 4.1.1 U8951(G510) , U8833(Y300) ဖုန်းတွေကို Root လုပ်စရာမလို … dload file မလို .. CWM မလို … Code မလုပ်ဘဲနဲ့ .. မြန်မာဖေါင့်အလွယ်ဆုံးထည့်မယ်ဗျာ . ..ဆိုင်သမားတွေ အဆင်ပြေ၀မ်းသာကြမှာပါ … အချိန်တွေ ပိုထွက်လာလို့လိုအပ်တာကတော့ ဒါလေးဘဲဗျ…. ဒေါင်းလိုက်ပါ http://goo.gl/4jpCy ဒေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြောတဲ့ ဖုန်းမော်ဒယ်လ်တွေထဲက ကြိုက်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး Power ဖွင့်ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ … ပြီးရင် Phone Internal Storage ထဲက HWThemes>> Diy Theme>> ကို ဒေါင်းထားတဲ့ TeeKg.hwt ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးထည့်လိုက်ပါ . .. ဖုန်းချိတ်ဆက်ထားမူ့ ကို ဖြုတ်လိုက်ပါ ..ပြီးရင် Application ထဲက Theme ထဲမှာကြည့်လိုက်ပါ … Elegance ဆိုတဲ့ Theme ကိုတွေ့ ပါလိမ့်မယ် … အဲဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါ … အဲဒီမှာ Apply Theme ဆိုပြီးတော့ သူကမေးပါလိမ့်မယ် .. . Theme with font ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါ … ဖုန်းက သူ့ ဘာသာ ရီစတက်ကျသွားပြီ ပြန်တက်လာလိမ့်မယ် .. . ပြီးနောက် မြန်မာကီးဘုတ်ထည့်ပြီးရိုက်လို့ ရပါပြီ… တခြား Theme များကို သုံးချင်ပါက သုံးနိူင်ပါတယ် … ဒါပေမဲ့ တခြား Theme ကိုသုံးရင်တော့ Theme without font ကိုရွေးပေးပါ … အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူငယ်ချင်းများအတွက် MMSD မှ ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။